Vaovao - inona no maha samy hafa ny polipera mihetsika roa sy ny mpandinika rotary
Inona no maha samy hafa ny polipera mihetsika roa sy ny mpandoto rotary
Inona no tsy itovizan'ny polisy sy ny rotera?
Raha ny resaka fisafidianana milina poleta, iray amin'ireo fanontaniana matetika apetraky ny mpanjifanay amintsika ny: "Inona no maha-samy hafa ny polisera mihetsika sy ny polisin'ny rotary?" Fanontaniana tena tsara izany ary ho an'ireo vao manomboka amin'ny milina fandotoana milina dia tena ilaina ny valiny!
Rotary Polisher no tranainy indrindra amin'ny kilasiny, talohan'ny nivoahany ny hetsika roa vaovao, dia tsy nanana an'ity karazana polisher ity izahay. Tena mahitsy ny mpamily rotary - ny loha tsy miova afa-tsy amin'ny fomba na inona na inona fanerenao azy amin'ny loko ny fiara dia hitohy mihodina amin'ny hafainganam-pandeha voafantina. Izy io koa dia mihodina amin'ny boriborintany tsy miovaova, mamorona fanapahana mahery setra kokoa nefa miteraka hafanana bebe kokoa. Ny polera rotary dia hitaky anao hanana traikefa bebe kokoa, tsy maintsy afindrao am-pelatanana ilay mpanaparitaka ary mila fantatrao ny hafainganan'ny famindrana ilay milina manerana ny loko. Masiaka kokoa ny poloney rotary, noho izany dia hanitsy ny gorodona lalina kokoa sy ny tsy fahalavorariana loko, raha tsy ampiasaina tsara.
Dual Action Polisher (na DA Polisher satria matetika nohafohezina) dia famoronana revolisionera. Mihodina amin'ny fomba 2 samy hafa izy: ny lohany dia mihodina amin'ny hetsika boribory concentric amin'ny spindle izay avy eo mihodina amin'ny fihetsiketsehana miely kokoa, noho izany mizara ny hafanana amin'ny faritra lehibe kokoa, misoroka ny hafanana be loatra sy ny fananganana fikorontanana, mahatonga azy io ho azo antoka kokoa mankany amin'ny fiaranao. Vokatr'izany dia azonao atao ny mamela an'ity polisy ity mihodina eo amin'ny toerana tokana ary manakana azy tsy handoro ny lokonao. Izany dia mahatonga ny DA ho safidy mety indrindra ho an'ireo mpankafy tsy tia mijery mitazona ny fiara ho 'tampon'ny tendrony' nefa tsy misy ahiahy mety haverina averina!